Soavaly Falabella, karazam-borona tsy omby | Soavaly Noti
El Soavaly Falabella dia tsy pony, na dia toa izany aza. Soavaly kely tena malaza ity izay manana karazany hafa. Mbola soavaly mitazona ny toetra mitovy noho ireo soavaly lehibe kokoa ary ekena iraisam-pirenena.
Ny Falabella dia avy amin'ny toeram-piompiana Recreo de Roca, Arzantina. Ireo soavaly ireo amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina amin'ny fametahana sy amin'ny biby fiompy. Ny niandohany dia avy amin'ny pony Shetland, amin'ny maha razambeny azy.
Ity karazany ity dia nalaina avy amin'ny Fianakaviana Falabella, izay mpikambana ao aminy no nanangana ny fiompiana ireo biby ireo tany amin'ny toeram-piompiana arzantina. Vokatry ny fiompiana atolotry ny hazo fijaliana biby kely kokoa ary avy eo amin'ny alàlan'ny dingam-pifidianana henjana sy hazo fijaliana mifangaro. Tsy avo noho 75 santimetatra izy ireo.
Karazana manana toetra mitovy amin'ny soavaly mahazatra
Nandritra ny taona maro, ity karazana soavaly kely ity dia nandalo fizotra maro samihafa, nitombo tany Angletera ary naondrana tany Etazonia izay toerana tena tian'izy ireo. Indraindray dia orinasa mahafinaritra ary tena mandaitra ka be fitiavana sy manan-tsaina izy ireo, na eo aza ny fiandohany tsy mahalala fomba.
Tsy misy na inona na inona milaza fa ny soavaly Falabella dia tsy manana ny toetra tsara sy toetran'ny karazany mitovy. Ny mampiavaka ny fototarazo dia mamela ny fiterahana voajanahary, soavaly miteraka mitovy toetra amin'ny zokiny lahy. Ankoatr'izay, ny maha-ambanivohitra azy ireo dia mamela azy ireo hanana toe-piainana tafavoaka velona amin'ny toe-piainana matanjaka indrindra. Izay mahatonga azy soavaly manana loharanon-karena betsaka hiaina noho ny soavaly mahazatra rehetra.
Mahagaga ny heriny miavaka. Manana fahaiza-mampifanaraka lehibe sy ny toetrany malefaka izy ireoIzy, izay tsy fahita firy amin'ny biby hafa antsoina hoe petisos, dia nanao ny Falabella ho soavaly sahaza ho an'ny zanak'olombelona ary indrindra ho an'ny ankizy izay vaovao amin'ny fitiavany soavaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly Falabella, karazana tsy pony